भिडियो Archives - E mechi
May192019 by Editorial DepartmentNo Comments
आफ्नै जेठाजु द्वारा बिभत्स हत्या गरिएकी अञ्जना लामाको ललितपुरका प्रज्वल महतसँग ६ वर्षअघि विवाह भएको थियो । मकवानपुर स्थायी ठेगाना भएकी लामाकी छोरी ललितपुरको फराकिलो महत परिवारकी सदस्य बनेर आएकी थिईन्।एउटा निजी कम्पनीका जागिरे प्रज्वल, अञ्जना, दाजु उज्वल, भाउजु र आमा–बुबा ललितपुर ढोलाहिटीको घरमा सगोलमै बस्थे। उज्वल ध्वनी इन्जिनियर र म्युजिक कम्पोजर थिए। परिवारका सबै सदस्यको आय राम्रै थियो।तर, केही महिनाअघिदेखि उज्वलको कानमा समस्या देखियो।उनलाई गितारमा सुर भर्न र सुर भरेका गीतलाई अन्तिम रुप दिन गाह्रो हुन थाल्यो। उनी बिस्तारै कार्यालयबाट बाहिरिए।‘म कानको उपचार गराइरहेको छु,’ उज्वलले २२ बैशाखमा आफ्नो फेसबुकमा लेखेका छन्, ‘मैले संगीतकर्म सधैँका लागि छाडेँ। भिडियो हेर्नुहोस
May62019 by Editorial DepartmentNo Comments
चर्चा पाउने निहुमा होस् या भाइरल बन्न कै लागि अचेल सामाजिक संजाल एउटा गतिलो मध्यम बनेको छ। दिनानुदिन मानिसहरुको व्यक्तिगत जीवन सामाजिक संजालमा छताछुल्ल हुन थालेको छ। यसरी कसैको जीवन सार्वजनिक भइराख्दा कतै सामाजिक संजालको दुरूप्रयोग त भैरहेको छैन ?भाइरल विषय कै कुरा गर्ने हो भने कहिले तरकारीवाली ‘कुसुम श्रेष्ठ’ त कहिले कैचिवाली ‘दिभिसा शर्मा’ जस्तै अर थुप्रै पनि केहि न केहि उपनामले चिनिरहेका छन्। सामाजिक संजालमा वाहवाहको पात्र बन्न पाउँदा त जो कोहिलाई पनि फुरुंग महसुस हुन्छ नै। त्यसकै विपक्षमा कालो कर्तुत पर्दाफास हुँदा हालत के होला? जनमानसले देवता मानेको पात्र दानव हो भन्ने थाहा पाउदा जनमानसको विश्वासमा कत्रो घात पुग्ला ? के फेरी कुनै ‘वली’ उपनाम पाउनेलाई आखा चिम्लेर विश्वास गर्न सक्छ जनमानसले ? वास्तविकता नलुकाउनु नै सबै भन्दा उत्तम कुरा हो। तर बेला बेलामा राम्रा व्यक्तिका पनि कालो कर
May42019 by Editorial DepartmentNo Comments
नेपाल एयरलाइन्सलाई उडन नदिइएको घटना र प्रवक्ताबाट कारवाहीबारे बिजय लामाको खुलासा- चालक दलका १४ सदस्यसहित २ सय ७६ यात्रु बोर्ड गरेर उडानका लागि तयार नेपाल वायुसेवा निगमको वाइड बडी विमानको निर्धारित दुवई उडान अकस्मात रद्द भयो । समयमा जहाज उड्न नसकेपछि र एयर ट्राफिक कन्ट्रोलले राती दश बजेदेखि विहान ८ बजेसम्म एयरपोर्टको रनवे मर्मतकार्य हुने भएकाले उडानका लागि अनुमति दिन नमिल्ने बताएपछि एयरपोर्टमा हल्लिखल्लि मच्चियो ।निगमले केही यात्रुलाई होटलमा लगेर राखिए पनि सयौं यात्रु जहाजभित्रै छोडिए । राति ९ बजे जहाजमा चढेका यात्रुलाई भोलिपल्ट बिहान ५ः१५ मा मात्रै प्रहरीले बाहिर निकाल्यो र पछि ८ः४५ बजे मात्र जहाज उड्यो । घटनाको छानविन गर्न बनेको समितिले एटीसीमा रहेका कर्मचारीले मानवीय हिसाबले परिपक्व निर्णय लिन नसकेको र बिमानस्थलमा भएका निगमका कर्मचारीले सञ्चार समन्वयमा कमजोरी गरेको निष्कर्ष निकाल्यो,
May32019 by Editorial DepartmentNo Comments
ग्रेजुएट दारी भाई हुन् राजेश रेग्मी (वर्ष २४) इन्जिनियरीङ फिल्डमा धेरै अनुभव भए पनि उनी आफ्नै चिया पसलमा रमाउन खोज्छन् । अहिले दारी भाई इन्जिनियरिङ छाडेर चिया पसलचिर लागेका छन । आफ्नै पसलमा १८ घन्टा मेहनत गर्न रुचाउँछन् । बिहान ५ बजे नै आइपुग्छन् उनी। अनि शुरु हुन्छ चियासँगको संगत । १) मसला हालेको मिल्क टि, २)सामान्य मिल्क टि, ३)सामान्य ब्ल्याक टि, ४)मसला हालेको ब्ल्याक टि, ५) बाजुरी टि जस्ता चिया उहाँको पसलमा पिन्न पाइन्छ । चियाको दाम अरु ठाउँभन्दा सस्तो पनि छ। सामान्य दुध हाललेको चिया २० रुपैया बेच्दै गरेको बताउँछन् । इन्जिनियरीङ गर्दा २०,२२ लाख जति सिधाए पनि दुख नमानेको बताउछन । इन्जिनियरीङ पढ्दा कोठा भाडा दिनु पर्ने भएकोले अरु साथीले मासु खाने म अन्डा खाएरर काम चालाउने गरेको समेत उनी बताउँछन् । दिनको १५० कप चिया सेल गर्नेगरेको उनी बताउँछन् । दिनको आम्दानी हजार रुपैयाँ भन्दा कम भएको
सबी कार्की एक चिर परिचित नाम हो । चलचित्र अग्रज पत्रकारिता २०७५ बट सम्मनित उनि १५ बर्ष देखी चलचित्र पत्रकारितामा छिन । एकदम हसिलो अनि चुलबुले स्वभाबकि सबी प्रस्ट बक्ता पनि हुन । अनमोल केसी कि आमा सुस्मिता केसीसँग नजिकको सम्बन्ध रहेकी उनि सन्चिता र निखिल उप्रतिको प्रेम सम्बन्ध सबै भन्दा पहिला आफुले नै थाहा पाएको बताउछिन । अनमोल केसी राम्रो छोरा प्रदिप खड्का राम्रो हिरो अनि रवी लामिछाने राम्रो पत्रकार भन्छिन उनि । भिडियो हेर्नुहोस
मिनाक्क्षी रेग्मी हाल बनेपा नगरपालिका ९ मा बस्दै आएकी माता तथा समाजसेवी हुन्। उनी आफुमा दिव्य शक्ति भएको दावी गर्छिन। अरुको दुख देख्दा आफैलाई कष्ट हुने भएकोले पैसा उठाएर आफैले श्री माई तथा रोजगार आश्रम संस्था खोलेको उनको भनाई छ। उनी पैसा नतोकी भक्तजनको सेवा गर्ने गरेको बताइन। डा. सिके राउतको बारेमा भविष्यवाणी गर्दै माताले भनिन्, ‘राउत मन्त्रि बन्न सफल हुदैनन्।’ त्यस्तै वरिष्ट पत्रकार रवि लामिछानेको विवाहको योग वैशाखमा देखिएको र कुनै बाधा नआई सम्पन्न हुने दैविक शक्तिबाट देखेको माताले बताइन। लिटिलबुद्ध राम बाहादुर बम्जनले ज्ञान र शक्तिको दुरुपयोग गरेको उनको आरोप छ।
सर्प भनेपछी हाम्रो सातो जान्छ। सर्पले डसेर पनि धेरै मानिसहरुले ज्यान गएको पनि छ । विश्वमा वर्षेनी सर्पको डसाइबाट कयौं मानिसहरुले ज्यान गुमाउने गर्छन्।यस्तै एक बिशाल सर्पले ब्राजिलको एक सडकमा रोड क्रस गरेको छ । ब्राजिलको बिआएर(३६४ हाइवेमा उक्त सर्पले रोड क्रस गर्न खोजेपछी सबै गाडीले ब्रेक लगाएका छन् ।रोड क्रस गर्न लागेको उक्त सर्पलाई सबै गाडी, साइकलले बाटो काट्न दिएका छन् । उक्त सर्प ९।८ फिट लामो भएको बताइएको छ ।सर्पले रोड क्रस गर्न खोजेको उक्त एनाकोन्डालाई सबैजना मानिसले सकूशल बाटो काट्न सहयोग गरेका छन् ।यो घटना ब्राजिलको पोर्टो भेल्होस्थित नर्थवेस्टर्न सिटी नजिकै भएको हो । रोड क्रस गर्न खोजेको एनाकोन्डालाई देखेर मानिसहरु निकै चकित परेका छन् । मानिसहरुले उक्त एनाकोन्डालाई सकूशल बाटो काट्न सहयोग गरेको यो भिडियो अहिले निकै भाइरल भइरहेको छ ।यो एक सत्य घटना हो । भिडियोमा हेर्नुहोस् https
Apr262019 by Editorial DepartmentNo Comments
कमजोर मुटु हुनेले नहेर्नुहोला,भुत पिचास बोक्सी मसानलाई भोक लागे पछी म काहा मासु खान आउछन [भिडियो हेर्नुहोस]
ज्योतिषि हरी शर्माले गरे निर्मला काण्डबारे अबिश्वासिलो रहस्य खोले,ज्ञानेन्द्रको राज सस्था फर्कन्छ या फर्किदैन,रवी लामिछानेलाई सुरक्षाको कत्तिको खाचो छ्,धुर्मुस सुन्तलिले क्रीकेट स्टेडीयम सफलता पूर्वक सम्पन्न गर्न सक्छन कि सक्दैनन भन्ने विषयमा गरिएको कुराकानी । ज्योतिषि हरी शर्मा युबा ज्योतिषि तथा तान्त्रीक हुनुहुन्छ । उहा जस्तो सुकै मान्छेको समस्या पनि तान्त्रीक बिधीबाट निको पार्ने दाबी गर्नु हुन्छ । कमजोर मुटु हुनेले नहेर्नुहोला,भुत पिचास बोक्सी मसानलाई भोक लागे पछी म काहा मासु खान आउछन । भिडियो हेर्नुहोस
२ फिट अग्ला दारी डनले फेसबुकबाट भेटाए ५ फिट अग्ली श्रीमती
हेटौडाका सन्तोष नगरकोटी साना कदका छन्। उनी साना कदका भएपनि उनको स्टाइल भन्ने निकै पृथक र आकर्षक छ। लामो कपाल, लामो दारी, कालो चस्मा र हातमा ट्याटु खोपेका उनी निकै हसिलो स्वभावका छन्। नाच्न असाध्यै मनपराउने उनी भन्छन, ‘ मलाई विवाह भोजमा निम्तो दिईर नै सबैले नाच्न बोलाउने गर्दछन। नाच्न कुनै पनि विवाहमा छुट्टाएको छैन मैले। बच्चै देखि नाचगान हासखेल गर्न रुचाउँछु।’ चलचित्रमा पनि अभिनय गर्न उनको ठुलो सपना छ। अवसर पाए फिल्ममा खेल्ने उनी बताउँछन। हसिलो स्वभावका उनको वैवाहिक जीवन पनि निकै सुखद छ। प्रेम दिवसका दिन उनलाई अपरिचित नम्बरबाट झुक्किएर कल आएको थियो। उनीहरु फोनमा बोल्दा-बोल्दै मित्रताको सम्बन्ध प्रेममा परिणत भयो। पछि भने उनले प्रेमिकालाई भगाएर विवाह गरेका थिए। उनकी श्रीमती भने उनीभन्दा ठुलो कदकी छिन्। उनी साढे दुई फिटका छन् भने उनकी श्रीमती झन्डै ५ फिटकी छिन्। प्रेममा कुनै स्वार्
वैशाख १२ गतेको महा-भुकम्पपछि उद्दार गरिएका बालक यस्ता भए,२२ घण्टा सम्म पुरिएर जिवितै उद्दार भएको थियो [भिडियो हेर्नुहोस ]
निलो रंगको विद्यालय टिसर्ट अनि मन्द हरियो रंगको ट्राउजर र सेतो जुत्ता लगाएका बालक मस्त निन्द्रामा थिए, आमाको काँधमा। देब्रे हातमा मोबाइल फोन छ, त्यही हातमा हरियो रंगको ब्याग पनि भिरेकी छन्।देब्रे काँधमा भुसुक्कै निदाएका छोरा नखसोस् भनेर दाहिने हातले कैँचे पारी देब्रे हातलाई ढाडस दिइरहेको थियो। चार वर्षको छोरालाई बोकेर १० मिनेट हिँड्दा आमा रस्मिता अवालको श्वास अलि अलि फुलेको थियो, तर त्यो श्वास फुलाइमा रस्मिताको माया लपप्क टाँसिएको थियो छोराको लागि। तर तीन वर्ष अगाडि आजको दिन झण्डै उनले आफ्नो मुटुको टुक्रालाई सधैँको लागि गुमाउनुपरेको थियो।सन्दर्भ २०७२ साल वैशाख १२ गतेको विनाशकारी भूकम्पको। भक्तपुरको देकोचामा घर भत्किएर पुरिएका सोनिस अवाल पुरिएको २२ घण्टापछि जीवितै उद्धार भएका थिए। त्यो दिन नेपालको १४ वटा जिल्लालाई ७ दशमलव ८ म्याग्निच्यूटको भूकम्पले नराम्ररी हल्लायो।गोरखाको बारपाकलाई